Umlando omfishane kaVicente Risco | Izincwadi Zamanje
Umbhali waseGalician uVicente Martínez Risco y Agüero, owaziwa kangcono ngokuthi UVicente Risco ezelwe edolobheni lase-Ourense ngo-1884 futhi kusukela esemncane wenza ubungani obukhulu nomunye umbhali odumile njengo-Otero Pedrayo, naye owayengumakhelwane wakhe.
Izifundo zakhe zaseyunivesithi zenziwa I-Santiago de Compostela, eyunivesithi yakhe wathola iziqu zomthetho. Kamuva wasebenza e-Ourense njengesisebenzi sikahulumeni futhi waqala izifundo zakhe, kodwa kulokhu eMadrid ukuze afunde ubuthishela. Emuva e-Ourense wayenguthisha Wezomlando.
Ilungu le- I-Irmandades da FalaEminyakeni ethile kamuva, wasungula umagazini iNós futhi washicilela i- Teoría do nacionalismo galego. Wabuye wadabula phakathi neYurophu ukuyofunda ngezici zamasiko kanye namanye amasiko, into ayishicilela kuqala njenge-serial kumagazini wakhe futhi kamuva waqoqa encwadini ebizwa ngokuthi "iMitteleuropa."
UVicente Risco, owayengacabangi ngaso sonke isikhathi, wakwazi ukuthola ndawonye nomngani wakhe nozakwabo Otero Pedrayo iRepublican Nationalist Party agcine eyishiyile ngesikhathi esondela kubaningi abazongenela ukhetho ukuze athole iqembu elisha elibizwa ngeDereita Galeguista.
URisco, owenza okuningi ngesiko laseGalician yize izinkolelo zakhe maqondana nodaba lobuzwe bezihlala zishintsha, ugcine eshonile ngonyaka 1963.
Isithombe - O marmurio da onda
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » Umlando we-Vicente Risco
UDavid calvo kusho
Wazalwa ngo-1884 eMorreu ngo-1963
Phendula uDavid Calvo